China DDI (Dimeryl Diisocyanate) mveliso kunye nabenzi | YANXA
I-DDI (iDimeryl Diisocyanate)
Imveliso: I-Dimeryl diisocyanateI-DDI 1410） CAS No. 68239-06-5
Ifomula yeMolekyuli: C36H66N2O2 IINKCUKACHA: 269-419-6
Ukuphathwa nokuGcinwa kwamanyathelo okhuseleko: QHUBEKA ISIXHOSA SIVALIWE NGOKUQINILEYO XA USENZA UKUSETYENZISWA. UKUGCINWA KWINDAWO YOKOMA.
I-Dimeryl diisocyanate (i-DDI) yinto ekhethekileyo ye-aliphatic (i-dimer fatty acid diisocyanate) i-diisocyanate enokusetyenziselwa iikhompawundi eziqukethe i-hydrogen esebenzayo ukulungiselela ubunzima bezinto eziphantsi okanye iipolymers ezizodwa.
I-DDI likhonkco elide kunye nekhonkco elikhulu le-fatty acids kunye nee-athomu ezingama-36 zekhabhoni. Olu lwakhiwo lomqolo lunika i-DDI ubhetyebhetye obuphezulu, ukuxhathisa kwamanzi kunye nobuthi obuphantsi kwezinye iisocyanates ze-aliphatic.
I-DDI lulwelo olusezantsi lwe-viscosity olunyibilikayo ngokulula kwizinyibilikisi ezininzi ze-polar okanye ezingasebenziyo.
1) yonke idatha yezobuchwephesha eboniswe apha ngasentla yeyakho ireferensi.
2) enye indlela eyamkelweyo yamkelekile kwingxoxo eyongezelelweyo.
I-DDI inokusetyenziswa kwi-rocket propellant eqinileyo, ukugqiba amalaphu, iphepha, ulusu kunye nokugxotha amalaphu, unyango lokulondolozwa kweenkuni, ukubiza ngombane kunye nokulungiselela iipropathi ezikhethekileyo zephepha le-polyurethane (urea), iglu kunye nesitywina, njl.
I-DDI ineepropathi zetyhefu esezantsi, akukho tyheli, inyibilike kwizinyibilikisi ezininzi eziphilayo, amanzi aphantsi anovakalelo kunye ne-viscosity ephantsi.
Kwishishini leLaphu, i-DDI ibonisa ukugqwesa kwesicelo kwindawo egcina amanzi kunye nokuthambisa kwiipropathi. Ayichukumisi kangako emanzini kuneesocyanates ezinamakha kwaye inokusetyenziselwa ukulungiselela i-emulsions ezinamanzi ezinzileyo. I-DDI ingayiphucula ifuthe lokugxotha amanzi kunye nokugxotha ioyile kumalaphu acocekileyo. Xa isetyenziswa ngokudibeneyo, i-DDI inokuphucula kakhulu iimpahla ezingangeni manzi kunye neoyile yokugxotha amalaphu.
I-DDI, elungiselelwe ukusuka kwi-fatty acid acids, luhlobo oluhlaza oluhlaza, oluhlaziyiweyo lwe-bio isocyanate. Xa kuthelekiswa ne-isocyanate TDI, MDI, HDI kunye ne-IPDI, i-DDI ayiyityhefu kwaye ayikhuthazi.
Ukuphathwa: Kuphephe ukunxibelelana namanzi. Qinisekisa ukuba kungena umoya kakuhle kwindawo yokusebenza.
Ukugcina: Gcina kwizikhongozeli ezivaliweyo, zipholile kwaye zomile.
Ulwazi lwezothutho: alulawulwa njengesixhobo esiyingozi.
Egqithileyo I-Potassium Perchlorate
Okulandelayo: Isodium Perchlorate
Isigaba seAmonium iNitrate sizinzile